Turkiga oo lagu dhaliilay garab istaag uu u sameeyay Somaliya – AfmoNews
Turkiga oo lagu dhaliilay garab istaag uu u sameeyay Somaliya
Dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha Turkiga, Rajab Teyib Erdogan ayaa lagu dhaliilay lacago ay ka bixisay Soomaaliya horaantii bishan.
Mucaaradka dalka Turkiga ayaa madaxweyne Erdogan ku dhaliilay lacag ay xukuumadda Ankara ka bixisay Soomaaliya, taas oo qeyb ka ah qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya.
Mucaaradka ayaa sheegay in aysan ku qanacsaneyn dhaqaalaha Turkiga uu ku daldalayo Soomaaliya xilligan oo dhaqaalaha Turkiga uu saameeyay cudurka Covid 19 iyo dhibaatada ka dhalatay musiibadii ka dhacday dalkaas.
Ali Mahir oo kamid ah mucaaradka dalka Turkiga ayaa dowladda ku eedeeyay in lacag badan ay siiyay Soomaaliya balse aysan dhaqaale fiican siinin dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay dhul gariirkii ku dhuftay magalaada Izmir.
“Waxaad lacag dhan 10 milyan oo Liira ugu deeqday dhibaatadii ka dhalatay dhul gariirka, halka lacag dhan 2.4 milyan oo doollar na aad ka bixisay Soomaaliya”, ayuu yiri Ali Mahir oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Turkiga ku qoray bartiisa Twiter-ka.
Turkiga ayaa horraantii bishan waxaa uuTurkiga faafinta rasmiga ah ee dowladda uu ku shaaciyay in lacag 2.4 milyan oo doollar uu ka bixiyay Soomaaliya, lacagtaas oo lagu wareejiyay hey’adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka, si loo gaaro yoolka deyn cafinta Soomaaliya.